Famolavolana paikady indray ny fizahantany amin'ny alàlan'ny festival, sakafo ary kolontsaina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Famolavolana paikady indray ny fizahantany amin'ny alàlan'ny festival, sakafo ary kolontsaina
Febroary 26, 2021
festival amin'ny India
Mpanoratra Anil Mathur - eTN India
Na dia ampiasaina aza ny vaksinina ary misy ny fanantenana ny fiverenan'ny fizahan-tany sy ny fizahantany COVID-19, ny paikady hananganana ny indostria hiverina dia fanamby ho azy ihany. Niova ny fomba fahitan'ny olona an'izao tontolo izao, ary noho izany ny fanosehana hamerina ny dia sy fizahan-tany dia niova.
Ny Konferansa momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany sy fizahan-tany India faha-11 natao tany Delhi dia nitady fomba isan-karazany hamelomana indray ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany.
Fety, sakafo ary hetsika ara-kolontsaina dia mety ho làlana hanintonana ireo mpizahatany handeha indray.
Ny fiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana aloha amin'ny alàlan'ny fitaterana ary avy eo amin'ny toerana, hotely, ary amin'ny trano fisakafoanana no zava-dehibe indrindra.
India dia tokony hanome lanja bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any ambanivohitra sy any an-toerana ary hampiasa ireo tranombakoka lehibe ananan'ny firenena koa. Ireto sosokevitra sarobidy ireto dia natolotry ny Padma Bhushan Shri SK Misra, (IAS), sekretera talen'ny talen-tsekoly taloha
Ny praiminisitra, izay nandany ampahany lehibe tamin'ny fiainany teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Misra dia nandray fitenenana ho toy ny loham-bahiny lehibe tamin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany 11th India nokarakarain'ny Banarsidas Chandiwala Institute of Hotel Management & Catering Technology any New Delhi. Nahasarika taratasy avy amin'ny firenena 12 ny kaonferansa, niely tamin'ny kaontinanta 3.
Nasongadin'i Misra ny andraikitry ny fikarohana, izay hanampy amin'ny fiatrehana ireo olana atrehana ankehitriny. Nasongadiny fa mpizahatany maro no maniry ny hahatsapa ny tena India, izay azo iainana amin'ny tanàna sy ny faritra ambanivohitra.
Raha ny tokony ho izy dia nilaza izy fa ny fetibe any India natao tamin'ny taona 1980 dia nahavita be tamin'ny fampiroboroboana ny dia mankany India avy amin'ireo firenena nitondrana azy ireo. Nanolo-kevitra izy fa tonga ny fotoana hanaovana fety toy izany indray. Nanampy izy fa ny foara Surajkund, tanterahina isan-taona, dia nahasarika olona maro avy ao amin'ny firenena sy avy any ivelany, manome fotoana ny artista haneho ny talentany.
Ny olana momba ny tontolo iainana sy ny faharetana dia manan-danja ihany koa hoy izy rehefa nidera ny vahoaka nanokana fotoana ho an'ny taranja toy izany izy. Ny fizahantany eto an-toerana dia faritra iray hafa manam-pahaizana be. Amin'io lafiny io dia zava-dehibe ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ny fifandraisana mba hiasa tsara.
Ashish Bansal, Profesora mpanampy, dia nanambara hoe: "Na dia miverina tsikelikely aza ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, ny krizy COVID-19 dia manisy fiantraikany lalina amin'ny fomba fiasan'ny orinasa mandray vahiny. Ny orinasa mandray vahiny dia antenaina hanisy fiovana lehibe amin'ny asan'ny COVID-19 eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha mba hiantohana ny fahasalamana sy fiarovana ny mpiasa sy ny mpanjifa ary hanatsara ny fahavononan'ireo mpanjifa hiaro ny orinasany.
“Ny ankamaroan'ny mpanjifa (50% mahery) dia tsy manaiky mandeha amin'ny toerana haleha ary mijanona amin'ny hotely atsy ho atsy. Manodidina ny ampahefatry ny mpanjifa ihany no efa nisakafo ao amin'ny trano fisakafoanana ary manodidina ny iray ampahatelony ihany no vonona handeha amin'ny toerana iray ary hijanona amin'ny hotely ao anatin'ny volana vitsivitsy. Ireo valim-pikarohana ireo dia manondro fa ny mpanjifa amin'ny ankapobeny dia mbola tsy mahazo aina mihinana ao amin'ny trano fisakafoanana mipetraka, mandeha amin'ny toerana aleha ary mijanona amin'ny hotely. Satria somary avo ny teboka vaky amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny noho ny vidin'ny fandidiana be dia be ny fahaveloman'ny orinasa mandray vahiny marobe amin'ny fiankinan-doha amin'ny tolotra sy ny vokatra vokariny. Noho izany, ilaina ny mamantatra izay hampiverina ny mpanjifa ary izany dia mitaky ezaka amin'ny fikarohana lalina. "
Ny mpandahateny lehibe tamin'ny kaonferansa dia i C. Cobanoglu avy amin'ny University of South Florida, Etazonia. Nasongadiny ny maha-zava-dehibe ny teknolojia amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, ary nilaza fa fivoarana maro no manampy amin'ny fampiorenana ny fahatokisan'ny mpandeha. Izy io ho fihaonambe virtoaly dia nahatonga ny fahalianana betsaka any India sy any ivelany.